Reference Id - AA-1621
Close Date - 16-Sep-2018
ပညာရေးနှင့်ပက်သက်သော Logo တစ်ခုကို တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေးဆွဲပေးနိုင်သောလူလိုအပ်ပါသည်။
Reference Id - AA-1496
Close Date - 13-Aug-2018
Job Description* Create exceptional UX and well designed websites on our state-of-the-art responsive website building platform
Reference Id - AA-1375
Close Date - 31-Jul-2018
we are looking for someone who can make creative design for automotive industry. - at least5design per week.freelance can propose fee per item.
Reference Id - AA-1336
Close Date - 11-Jul-2018
ှိုလုပ်ငန်း process များကို လွယ်ကူသော diagram များအနေဖြင့်ရေးဆွဲခြင်း
ကျွန်တော့်တို့က marketing plan တွေဆွဲကြတဲ့အခါ သုံးရတဲ့ format နဲ့ process တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့လိုရှိတာတွေကို စနစ်တကျ လူတိုင်းမြင်တာနဲ့ နားလည်ရှင်းလင်းမယ့် diagram လေးတွေရေးဆွဲချင်တာပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ process ဆိုလျှင် စာချည်းပဲဖတ်ရတာ ငြီးငွေ့ပြီး ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။ ဒါကို ဆွဲဆောင်မှုရှိပြ...
Reference Id - AA-0649
Close Date - 04-Jan-2018